Naqshad: Sidaad Looga Heli Karo Gaadiidka Gaadiga Google Analytics
Ma aragtay tirada bootada faragelinaysa boggaaga ayaa sii kordhaya? Haddii jawaabtaadu tahay "haa," Max Bell, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Nabadgalyada , ayaa kaa caawin doona inaad la qabsato dhibaatadan! Mashruuc kasta oo websaydh ah, Google Analytics ma awoodi karo in uu isbaaro ama boodo, taas oo saameyn ku leh goob kasta. Dhab ahaantii, waa arrin iska beddeleysa madax xanuunka dhabta ah ee xayeysiinta internetka.
Waa Maxay Gaadiidka Gaadiidka?
Google Analytics, ereyga "waxqabad bot" waxaa loo isticmaalaa in lagu sharaxo goobta ka hooseysa weerarka xagjirka xun iyo robots - commercial appraiser. Waxqabadka noocan oo kale ah ee ku saabsan bogga internetka, wuxuu si weyn u yareeyn karaa waxqabadka guud ee waxtarka leh.
Sida loo kala saaro Hawsha Botonta Google Analytics?
Waa tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo ah si loo ogaado waxqabadka botas Google Analytics:
Guji helitaanka Qeybta bidix ee ku yaal qaybta bidix, markaa ku dhufo Waddooyinka iyo Dhamaan Gaadiidka. Kadibna tag qaybta qaybta "Channel Channel" ee warbixinta oo guji Gudbi.
Ma taqaanaa inta badan ilahaaga gudbinta? Haddii jawaabtaadu tahay maya, oo ayna u muuqdaan kuwo muhiim u ah hawlahaaga, tani waxay noqon kartaa qaybta ugu muhiimsan ee macluumaadka si ay u muujiso in tani ay tahay gaadiidka bot..Qeybta hoose ee bogga riix "taxanaha safka" si aad u hesho khadadka buuxa ee gudbinta.
Waa in aad la socotaa spamkaaga kaddib markaad tixraacayso tilmaamaha sare ee shuruucda kor ku xusan, hase yeeshee si aad u sii fahamto spammers ugu caansan, waxaanu kugu soo aragnay dhawr xaaladood:
Sidee looga hortagi karaa Hawsha Botanada Google Analytics?
Ilaa gaabniga Google uu xaliyo arrintan, waxaa jira dhawr fursadood oo aad ka fiirsan karto.
Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu xallin karo arinta la sharraxay waa in la abuuro jidka ka joojiya baaskiilka ama qaanadaha oo si xun u saameeya xogtaada.
Ka dhig khasaari ka mid ah tirada meelaha aadka u sarreeya iyo subdomains ee aad ku socoto Google Analytics.
Beddelaad kale oo aad sameyn kartid waa inaad wax kasta ku soo gasho jumladaha Excel iyo helitaanka macluumaadka aad u baahan tahay.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan doorashadu waa in la hubiyo in socodka baaskiilka uusan wax saameyn ah ku yeelanayn macluumaadkaaga Google Analytics. Ku darida jidka waa habka ugu wanaagsan ee loo fuliyo. Kaliya raac talooyinkan, mar walbana marna waji ma leh dhibaatada kor lagu sharaxay!